नेप्से परिसुचक हालसम्मकै उच्च, शेयर कारोवार १३ अर्ब २९ करोड | Taja Update
एमाले अध्यक्ष ओली र बरिष्ठ नेता नेपालवीच आज भेटवार्ता हुँदै, पार्टी एकता जोगाउन गंभिर छलफल हुने
भूकम्पले क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप पुर्ननिर्माणको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न
बिभिन्न राजमार्गका १५ स्थानमा पहिरो, सडक खुलाउन प्रयास जारी
के छ आज बिदेशी मुद्राको विनिमय दर ?
लकडाउन १२ दिन लम्ब्याउने मन्त्रीपरिषदको निर्णय
प्रशिक्षक अनुशासन बाहिर गएका हुन् : किरण राई
सुनको मुल्य स्थिर
नयाँ बसपार्कमा लोत्से मल सञ्चालनमा
सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण सुरु
शिक्षामा अध्ययनरत गरिव र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि छुट्टयाइएको छात्रवृत्ति दूरुपयोग हुन नदिन सरकारसँग माग
जिल्ला प्रहरी सुनसरीद्दारा १ महिनामा २ सय ३८ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ
सुकुम्बासी आयोग मार्फत भूमि सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान गरिने : मन्त्री पद्मा अर्यालको भनाइ
नेप्से परिसुचक हालसम्मकै उच्च, शेयर कारोवार १३ अर्ब २९ करोड
Taja Update2months ago
साउन १३, काठमाडौं । बुधवार नेपालको शेयर बजार परिसुचक नेप्से ३ हजार ९४ दशमलव ९४ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
शेयर कारोवार भने १३ अर्ब २९ करोड १९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ८१ लाख ७० हजार १७२ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
यो दिन अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात् १५ दशमलव ३० अंकले बढेको हो । ३ हजार ८८ दशमलव ४५ विन्दुदेखि खुला भएको बुधवारको बजार ३ हजार ११२ दशमलव २१ विन्दुसम्म पुगेको थियो भने ३ हजार ७५ दशमलव ९५ विन्दुसम्म झरेको थियो ।
अघिल्लो कारोबार दिन मंगलवार नेप्से परिसूचक २९ दशमलव २४ अंकले बढेर ३ हजार ७९ दशमलव ६७ विन्दुमा बन्द भएको थियो । बुधवार सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने स्थिर रहेको छ ।
यो कारोबार २१९ पटकको व्यापारमा १ लाख २८ हजार ७८० पटकको व्यापारमा भएको हो । बुधवार सर्वाधिक रकमको कारोबार युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको भएको छ । उक्त कम्पनीको ३८ करोड ६१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको कम्पनीको शेयरमूल्य भने प्रतिकित्ता ६ दशमलव ४० रुपैयाँले बढेर अन्तिम मूल्य ४८६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरपछि नेशनल हाइड्रोपावरको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । उक्त कम्पनीको ३६ करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य भने प्रतिकित्ता १० रुपैयाँले बढेर अन्तिम मूल्य ३७७ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
यस दिन नारायणी डेभलपमेण्ट बैंक, मल्टिपर्पस फिनांस र चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयरमूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको प्रतिकित्ता ७३ रुपैयाँले बढेर अन्तिम मूल्य ८०३ रुपैयाँ, मल्टिपर्पस फिनांसको प्रतिकित्ता. ४८ दशमलव ६० रुपैयाँले बढेर अन्तिम मूल्य ५३४ दशमलव ८० रुपैयाँ र चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको प्रतिकित्ता १४८ दशमलव ९०रुपैयाँले बढेर अन्तिम मूल्य १ हजार ६३७ दशमलव ९० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
बुधवार बढेको बजारमा पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य सर्वाधिक ५ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत घटेको छ । यस दिन पञ्चकन्यामाई हाइड्रोको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता १९ रुपैयाँले घटेर अन्तिम मूल्य ३५६ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
Posted in विजनेस, शेयरबजार, समाचार
माओबादी केन्द्रबाट निर्बाचित सांसदले सर्बोच्च गुहारे
साउ १३, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका चार नेताले सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरूलाई सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । फागुन २३ गतेको सर्वोच्च […]
सोमवार सुनको मुल्यमा २ सयले गिरावट
व्यवसायीहरुलाई काठ विकृवितरणका लागि तत्काल छुट पूर्जी दिन सरकारलाई निर्देशन
पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघद्धारा प्रदर्शन
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट नेपालमा थप ५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गत प्रचार प्रसार तथा अतिथि सत्कार समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाइ मनोनयन पत्र प्रदान
प्रदेश नं. १ र बागमती प्रदेशमा छिट्टै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ : माधवकुमार नेपाल
हात्तीको संरक्षण नगरे लोप हुने खतरा